Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 499377 times)
« Reply #770 on: December 26, 2011, 06:17:41 PM »
ဘိုင်အို ဆရာပဲ... ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေ့ါ
သမိုင်းဆရာ ဒီနေ့ နေမကောင်းပါ
ဒါကြောင့် ဘိုင်အိုဆရာကို မေးခွန်းထုတ်ရန်အတွက် အကူညီတောင်းပါတယ်။
ဘိုင်အိုဆရာရဲ့မေးခွန်းကိုဖတ်ပြီး ကျောင်းသားတိုင်း တုန်လှုပ်သွားကြပါတယ်။
မင်းတုန်းမင်းအကြောင်းကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပြီး သေသပ်သော Diagram တစ်ခုကို ရေးဆွဲပါ ၊ အစိတ်အပိုင်းများကို Label ထိုးပေးပါတဲ့။
« Reply #771 on: December 26, 2011, 06:19:27 PM »
ဆရာဝန် - ခင်ဗျားကိုဝမ်းသာစရာနဲ့ ဝမ်းနည်းစရာပြောစရာရှိတယ်
လူနာရှင် - ဟုတ်ပြောပါဆရာ
ဆရာဝန် - ခင်ဗျားမိန်းမဗိုက်ထဲကအလုံးကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ ခွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့်အဲဒီအကြောင်းခင်ဗျားမိန်းမသိသွားရှာဘူး။
« Reply #772 on: December 26, 2011, 06:34:43 PM »
ပါတီပွဲတစ်ခုမှာ ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့် ကောင်လေးတစ်ယောက်က ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆီကိုလာပြီး
"ခင်ဗျား အခုကတော့မှာလား" လို့မေးတယ်။ ကောင်မလေးလဲ ဝမ်းသာပြီး အင်း လို့ခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်။
"ကောင်းလိုက်တာ။ ကမယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားအခုထိုင်နေတဲ့ ထိုင်ခုံလေး ပေးခဲ့လို့ရမလား"
« Reply #773 on: December 28, 2011, 07:30:02 AM »
(ဖေ့စ်ဘုတ် မှ ကူးယူပါသည်။)
‎ခုနှစ်ရက်သားသမီးများ အတွက် ၂၀၁၂ ဗေဒင်
ဒီနှစ်သည် တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက် အထူးကံကောင်းသောနှစ်ဖြစ်သည်။ ခြေတစ်လှမ်း ကုဋေတစ်သန်းဆိုသည့်အတိုင်း ခြေတစ်လှမ်းလှမ်းတိုင်း ကုဋေတစ်သန်းကောက်ရမည်။ စန်းအလွန်ပွင့်၍ ဆော်အရမ်းကြည်ပြီး ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေမည်။ သို့သော် စိုးမိုးကျော်မဟုတ်ပေ။ ရုပ်ဖြောင့်သလောက်ဆော်ကြည်မည်။
တနလာင်္သားသမီးတို့အတွက် ကံကောင်းသည်ဟု ပြော၍မရသော်လည်း ကံကောင်းနေမည်။ လမ်းလျှောက်လျှင် ဖိနပ်စီး၍ မိုးရွာပါက ထီးဆောင်းပါ။ အိမ်ထောင်ကျပြီး အမျိုးသားဖြစ်ပါက မိန်းမရှိမည်။ အမျိုးသမီးဖြစ်ပါက ယောကျာင်္းရှိမည်။ အကျိုးပေးသောအရောင်များမှာ - နီ ၊ စိမ်း ၊ ၀ါ ၊ ပြာ ၊ မဲနယ် ၊ လိမ္မော် ၊ ခရမ်း ၊ အနက် ၊ အဖြူ ၊ မီးခိုး ၊ အညို တို့ဖြစ်သည်။
ကံအလွန်ကောင်းမည်။ ရေသောက်လျှင်သေးပေါက်ပြီး ရေမသောက်ပါက ရေဆာမည်။ သို့သော် ထမင်းမစားပါက ဗိုက်ဆာမည်။ ဗိုက်ဆာလာပါက ထမင်းစားပါ။ ထမင်းစားရန် ထမင်း ၊ ဟင်း သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံမရှိပါက ရေသောက်၍ဗိုက်မှောက်အိပ်ပါ။ သို့သော် အိပ်ရန်ခေါင်းအုံးတစ်လုံးရှိသင့်သည်။
ကျန်းမာရေးအတွက် ရေကိုကျိုချက်သောက်သုံးသင့်သည်။ ရေမကျိုနိုင်ပါက ရေသန့်ဝယ်သောက်ပါ။ ရေသန့်ဝယ်ရန်ပိုက်ဆံမရှိပါက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ ရေနွေးကြမ်းတောင်းသောက်ပါ။ လူကြီးဖြစ်ပါကအသက်ကြီး၍ လူငယ်ဖြစ်ပါက အသက်ငယ်မည်။ ရာထူးတိုးရန် ကိုယ့်အထက်လူကြီးများကို တုတ်နှင့်ရိုက်ပါ။
ဒီနှစ်သည် ကြာသာပတေးသားသမီးများအတွက် ၂နာရီခွဲလောက် မတ်တပ်ရပ်နေပါက ညောင်းလာမည်။ ပြေးနေပါကမောမည်။ ကလေးသူငယ်များအဖို့ အိမ်ရှေ့ဝရံတာမှ ခုန်ချတိုင်းကစားသင့်သည်။ အလောင်းကစားအကျိုးမပေးသော်လည်း မောင်းလောင်းကအောင်မည်။
လောင်းကစားလွန်စွာအကျိုးပေးမည်။ သို့သော် ထီမထိုးသင့် ချဲများများထိုးသင့်သည်။ အကျိုးပေးဂဏန်းများမှာ- ၉ ၆ ၃ ၂ ၅ ၁ ၄ ၇ ၈ ၀ တို့ဖြစ်သည်။ နှစ်လုံး သုံးလုံး များများထိုးပါ။ မပေါက်ပါက ပိုက်ဆံမရပေ။
စနေသားသမီးတို့အတွက် ကံကောင်းသည်ဟု ပြော၍မရသော်လည်း ကံကောင်းနေပြန်မည်။ ရေချိုးပါက ဆပ်ပြာတိုက်ပါ။ သခွားသီးသုံးလုံးကို အစိမ်းလိုက်စားပါက ဗိုက်ပြည့်ပြီး လေထိုးမည်။ ဗိုက်ဆာသလောက်ထမင်းစားရမည်။
« Reply #774 on: December 30, 2011, 01:03:15 AM »
A Boy Failed In Exam.
He said to his Old Prof -I'll ask uaQuestion, if u can't answer, u'll have to give me 'A' grade & he asked-
"What is legal but not logical, logical but not legal, & neithr logical nor legal?"
Prof couldn't answer & gave him 'A' grade.
LaterdStudent Answered-
Sir, U are 63 Years Old & Ur Wife Is 30Yrs Old,
that's Legal but Not Logical...
Ur Wife Hasa23Yrs Old Boyfriend, It's Logical But Not LeGal...
Now U Have Giving Ur Wife's Lover 'A' Grade,
that's Neither Logical Nor Legal...!!
« Reply #775 on: December 30, 2011, 12:05:40 PM »
ခရက်ဒစ်တူ မူရင်းဖန်တီးရှင် ရုပ်ဆိုးကြီး ဖေ့စ်ဘုပ်မှ ဖြစ်ပါသည်။ (အနည်းငယ် ထပ်ဆောင်းမှုပြုထားပါသည်။)
အချစ်တက္ကသိုလ် မြန်မာစာ မေးခွန်းလွှာ
မှတ်ချက် ။ မေးခွန်းအားလုံးဖြေဆိုရန်လိုအပ်ပါသည်။ မေးခွန်းလွှာတွင် စုစုပေါင်းမေးခွန်းကြီး ၅ ပုဒ်ပါရှိသည်။
၁။ (က) အောက်ပါမေးခွန်းများကို ဖြေချင်သလိုဖြေပါ။ (၂၀ မှတ်)
၂။ (က) အောက်ပါဝေါဟာရတို့အနက်မှ ငါးခု၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ဆရာမလစ်မှခိုးချပါ။ (၂၀ မှတ်)
၃။ (က) အောက်ပါတို့အနက်မှ ငါးခုကို ဖြေချင်ဖြေ မဖြေချင် အိပ်နေပါ။ (၂၀ မှတ်)
၄။ (က) အောက်ပါတို့အနက်မှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တစ်ပုဒ်ကိုရွှီးပါ။ (၂၀ မှတ်)
"အမေပြောတော့ ငယ်သေးတယ်၊ ရေချိုးမှသိကွယ်" ကဗျာ၏ အဓိပ္ပါယ်ကှို စာစစ်အဖွဲ့ အကြိုက်တွေ့အောင် ဖြီးဖြန်းရေးသားပါ။
(သို့) "ရင်ထဲမှာ ဘာညာဘာညာ" ကဗျာမှ ခံစားရသော ရသကို ရေးပါ။
သိင်္ဃသူ့သမီးကျောက်စာမှ သိင်္ဃသူ့သမီး၏ အကြွားကြီးပုံ၊ လေလုံးထွားပုံ၊ သူ့ကိုယ်သူ သက်မွန်မြင့်နှင့်တူပုံ၊ရဲလေးအား အသေရရ အရှင်ရရ လိုချင်ပုံတို့ကို အစီအစဉ်တကျ ရှင်းပြပါ။
(သို့) "လင်မယားရန်ပွဲ" မှ လင်မယားနှစ်ဦး၏ ဂုဏ်ရည်ကို ပေါ်လွင်အောင် ရေးသားပါ။
၅။ (က) စကားစပ်နှင့်တကွ ရှင်းပြပါ။ (၂၀ မှတ်)
« Reply #776 on: January 04, 2012, 05:59:50 PM »
သားကို ဘယ်လိုမွေးတာလဲ အဖေ
ကလေး. ၊ ဖေဖေ၊ သားကို ဘယ်လိုမွေးလာတာလဲဟင်???
ဖခင် ၊ အေး၊ ငါ.သား။ မင်းတစ်နေ.နေ.မှာသည်လိုမေးမှာပဲလို. ........ ငါတွက်ထားတာကွ၊
ဒီလိုနဲ.နောက်ဆုံးမင်းအမေက ဖေဖေ.ကို download လုပ်နုိုင်တယ်လို. ခွင့်ပြူတယ်။
သူကလည်းဖေဖေ.ကို uploaded ပြန်လုပ်တယ်၊ ဖေဖေတို.နှစ်ယောက်လုံး firewall ချမထားမိဖူး၊ ပြီးတော့ delete button ကိုလည်းမနှိပ်မိဖူး၊
နောက် ကိုးလကြာတော. မင်းကိုရလာတာပေါ.၊ အဲသည်အချိန်ကvirous အကိုက်မခံလိုက်ရတာလည်းပါတာပေါ.၊ current ကလည်းလုံးဝမှန်နေခဲ.တာ၊ မင်းကံကောင်းတယ်ငါ.သား၊
« Reply #777 on: January 06, 2012, 12:28:14 PM »
မယား ဝတ္တရား (၅) ပါး
« Reply #778 on: January 06, 2012, 04:39:16 PM »
« Reply #779 on: January 09, 2012, 11:58:18 AM »
(Credit to ဖြိုးစုကို - Face Book မှဖြစ်ပါသည်။)